Ny finday 10 nahavita be indrindra tamin'ny Aogositra 2021 | Androidsis
Iray amin'ireo tolotra malaza indrindra sy malaza ary atokisana indrindra amin'ny Android Android, tsy isalasalana, AnTuTu. Ary izany dia, miaraka amin'ny GeekBench sy ireo sehatra fitsapana hafa, dia atolotra antsika hatrany ho mari-pahaizana azo itokisana izay raisinay ho toy ny teboka fanovozan-kevitra sy fanohanana, satria manome fampahalalana mifandraika aminay ny fahafantarana ny heriny, ny haingana. ary mahomby dia. finday, na inona na inona.
Toy ny mahazatra, matetika ny AnTuTu dia manao tatitra isam-bolana na, indrindra, ny lisitry ny terminal mahery indrindra eny an-tsena, isam-bolana. Noho izany, amin'ity fotoana vaovao ity dia asehonay anao ny volana Jolay tsirairay avy, izay no farany naseho tamin'ny hazavana ary mifanaraka amin'ity volana Aogositra ity. Andao hojerena!
1 Ireo no finday avo lenta manana ny fahombiazany amin'ny volana Aogositra
2 Ny salantsalany tsara indrindra
3 Xiaomi Black Shark 4 Pro, ny finday miaraka amin'ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny rehetra
Ireo no finday avo lenta manana ny fahombiazany amin'ny volana Aogositra
Ity lisitra ity dia naseho vao tsy ela akory ary, araka ny asongadinay, an'ny Jolay lasa teo, saingy mihatra amin'ny volana Aogositra satria izy no tampon'isa farany farany farany, ka afaka manome izany fiodinana izany ny AnTuTu amin'ny laharana manaraka amin'ity volana ity, izay ho hitantsika amin'ny volana septambra. Ireto ny finday avo lenta matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao, araka ny sehatra fitsapana:
Satria azo faritana amin'ny antsipiriany ao amin'ilay lisitra apetaka etsy ambony, ny Black Shark 4 Pro sy Red Magic 6 Pro no biby roa izay hita amin'ny toerana roa voalohany, miaraka amin'ny isa 854.439 sy 831.163, ary tsy mitovy ny isa lehibe eo amin'izy ireo. Ireo finday avo lenta ireo dia manana ny sehatra finday Qualcomm's Snapdragon 888.
Ny toerana fahatelo, fahefatra ary fahadimy dia alain'ny OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro ary realme GT, miaraka amin'ny isa 822.338, 818.309 808.852 ary XNUMX, hanakatona ireo toerana dimy voalohany ao amin'ny lisitra AnTuTu.
Mba hamaranana, ny tapany faharoa amin'ny latabatra dia ny OnePlus 9 (807.935), Vivo X60 Pro Plus (806.746), iQOO 7 (806.625), Meizu 18 (790.387) ary Xiaomi Mi 11 Ultra (787.450), ao amin'ny baiko mitovy, hatrany amin'ny toerana fahenina ka hatramin'ny fahafolo.
Ny salantsalany tsara indrindra
Tsy toy ny lisitra voalohany efa voalaza, izay anjakan'ny chipset an'ny processeur Snapdragon 888 ihany, ny lisitr'ireo finday avo lenta 10 androany misy ny fahombiazana tsara indrindra ho an'ny Jolay 2021 avy amin'i AnTuTu dia misy finday avo lenta miaraka amin'ireo mpikirakira MediaTek., Kirin ary, mazava ho azy, Qualcomm. Ny Exynos an'i Samsung, toy ny tamin'ny fanontana taloha, dia tsy hita intsony amin'ity indray mitoraka ity.
Taorian'ny Xiaomi Mi 11 Lite 5G, izay nahavita nanamarika endrika ambony 531.960 ary ampiasain'ny Mediatek's Dimensity 820, ny Honor 50 Pro, izay ampiasain'ny Snapdragon 778G, dia napetraka amin'ny laharana faharoa, miaraka amin'ny 507.095 isa . Manaraka izany ny Honor 50, miaraka amin'ny isa 505.637. Ity farany dia miasa miaraka amin'ny Snapdragon 778G ihany koa.
Ny Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G ary realme Q3 Pro dia niantoka ny laharana fahefatra, fahadimy ary fahenina, arakaraka izany, misy isa 480.420, 451.863 ary 450.945. Ny Oppo K9 5G dia eo amin'ny laharana fahafito, misy marika 450.024 isa.
Ny iQOO Z3 sy Huawei Nova 8 Pro dia eo amin'ny laharana fahavalo sy fahasivy, miaraka amin'ny 443.120 sy 438.624, avy. Ny voalohany dia finday avo lenta finday avo lenta izay misy Kirin 985 matanjaka, raha ity farany kosa dia asongadin'i System on Chip ihany koa. ny Huawei Nova 8Miaraka amin'ny Kirin 985 sy ireo teboka 431.250 tsy azo iadian-kevitra azo teo amin'ny sehatry ny fitsapana, io no finday avo lenta farany amin'ny lisitra AnTuTu.
Miharihary ny karazana chipset hitantsika ato amin'ity lisitra ity, na dia tsy ao anatin'izany ny maodelin'i Exynos, saingy efa raharaha ho an'i Samsung io, satria tsy dia mifaninana amin'ity sehatra ity, raha ny fahombiazana sy ny heriny. Mitranga izany aorian'ny Mediatek sy Huawei, miaraka amin'i Kirin, nandao an'i Qualcomm tamin'ny lisitra teo aloha. Efa nametraka ny batery hatry ny ela ilay mpanamboatra amerikana ary nahavita nametraka «chipset» marobe tao an-tampon'io, ary namela ny iray aminy ho voalohany.
Xiaomi Black Shark 4 Pro, ny finday miaraka amin'ny fampisehoana tsara indrindra amin'ny rehetra
Ankehitriny mba hamita sy hanome ny fankasitrahana mendrika Xiaomi Black Shark 4 Pro Satria mitohy mitarika ny laharana AnTuTu, hiresaka momba ny toetra mampiavaka azy sy ny mason-tsivana izay hireharehan'ny olona matanjaka indrindra amin'izao fotoana izao, araka ny an-tampon'ny avo lenta miaraka amin'ny fampisehoana tsara indrindra hatreto amin'ity 2021 ity.
The Black Shark 4 Pro dia finday avo lenta smartphone izay tompony efijery teknolojia Super AMOLED 6.67-inch miaraka amin'ny vahaolana FullHD + 2,400 1,080 x 20 teboka ary tahan'ny lafiny 9: 144. Ho setrin'izany, ity takelaka ity dia manana tahan'ny haingam-pandeha avo indrindra 10 Hz, HDR1,300 ary famirapiratanana XNUMX nits.
Ity fitaovana avo lenta ity dia mampiasa ny processeur Qualcomm Snapdragon 888, ilay chipset izay miaina ao anaty vavony ary afaka mahatratra ny refin'ny famantaranandro 2.84 GHz, ankoatran'ny valo fototra ary manana ny Adreno 660 GPU. Ho setrin'izany, ny fitaovana dia aseho amin'ny kinova maromaro, izay azon'izy ireo atao ho 8, 12 na 16 GB ary 256 na 512 GB ny toerana fitahirizana anatiny. Mazava ho azy, tsy misy ny fanohanana ny fanitarana amin'ny alàlan'ny microSD.
Etsy ankilany, Xiaomi's Black Shark 4 Pro dia mirehareha amin'ny rafitra fakan-tsary telo miverina miaraka modely lehibe 64 MP miaraka amina f / 1.8 aperture, fakan-tsary fakan-tsary faharoa 8 MP miaraka amina f / 2.2 ary mpitifitra farany 2 MP ary aperture f / 2.4 ho an'ny sary makro. Ho setrin'izany, manome fakan-tsary 20 MP eo alohan'ilay f / 2.5 aperture ao anaty lavaka ao amin'ny efijery izay hita eo afovoany afovoan'ny efijery.
Ity terminal ity dia misy baterian'ny 4,500 Mah fahaizana izay manohana haitao haingam-pandeha 120 watt.
Ny endri-javatra hafa amin'ity finday ity dia misy rafitra fampangatsiahana mandroso mandritra ny fotoana maharitra milalao, mpamaky rantsan-tànana amin'ny ilany ankavanana, rafi-pandaminana Android 11 miaraka amin'ny sosona MIUI 12.5 personalization, NFC amin'ny fandoavam-bola tsy misy fifandraisana (contactless), fampidirana 3.5 jack ho an'ny sofina sy fitenenana stereo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ny finday tsara indrindra 10 tamin'ny volana Aogositra 2021